बिनोद र अनिताको जीवनमा के भयो फेरी ? – Gazabkonews
बिनोद र अनिताको जीवनमा के भयो फेरी ?
अहिले पछिल्लो समयका निकै नै चर्चीत त भाइरल जोडी लामो समय देखि अस्पतालमा उपचार गरिरहेकी अनिता र बिनोदको प्रेम कहानी थाह नपाउने कमै हुनुहुन्छ हो त्यहि प्रेम कहानी अब गीतबाट बाहिरिएको छ। अनिता खड्का र बिनोद को जोडीलाइ लिएर करोडौ दर्शक चकित मात्रै छैनन् ।
विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिको प्रस्तुतिमा बजारमा आएको उक्त गीतमा अनिता खड्कालाइ सधै स्याहार सुसार गर्दै आएकी बिनोदकि दिदि राधा खड्का पनि जोडिएकी छिन। लोकप्रिय गायिका पूर्णकला बिसी र बिमल डाँगीले आवाज दिएको उक्त गीतमा बिमल डाँगीकै मन रूहाउने संगीत रहेको छ भने कमल सरगमको शब्द उक्त गीतमा रहेको छ।
चर्चित निर्देशक काजिश श्रेष्ठले निर्देशन गरेको भिडियोको छायांकन भने हरिश महराले गरेका हुन् भने सम्पादन बिनोद बम ले गरेका छन।विन्ध्यवासिनी म्युजिकको युटुब च्यानल मार्फत बजारमा आएको उक्त गीतले सबैको मन जित्ने पक्का देखिएको छ। दर्शकको प्रतिक्रिया पनि निकै सुन्दर छ। गीतको टिमलाई बधाई छ। अब प्रस्तुत छ भिडियो सामाग्री:
ओलीले एक्सन लिएपछि माधव पक्षका यी दुई नेता सम्पर्क विहिन : नेकपा एमालेले पार्टीहित र अनुशासन विपरित काम गर्ने चार नेतासँग स्पष्टिकरण पत्र पठाएको छ । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई आज स्पष्टिकरण पत्र बुझाएको हो ।पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट गएका कर्मचारीले खामबन्दी स्पष्टिकरणपत्र बुझाएका हुन् । नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डेका स्वकीय सचिवले पत्र बुझेका छन् भने भिम रावल र धनश्याम भुषाल भने सम्पर्क विहिन भएका छन् ।
रावलले स्पष्टिकरणपत्र बुझ्न अश्वीकार गर्दै पत्र लिएर गएका कर्मचारीलाई घर भित्रै छिर्न दिएनन् । घर भित्र छिर्न नपाएपछि ति कर्मचारीले रावल बस्ने टोखास्थित कोलोनीको सी १४ नम्बर घरको लेटर बक्समा पत्र छिराएर फर्किएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।